9 Qeybo Cajiib Ah Dhismaha London Casriga Ah | Wararka Safarka
London sidoo kale waxay leedahay qaab dhismeed casri ah
Mariela Carril | | England, London, Maxaa la arkaa
Magaalooyin badan oo qarniyo jir ah ayaan lagu aqoon nooc dhisme gaar ah. Waxay ku noolaayeen qarniyo badan oo laga yaabo inay soo mareen dagaalo ama dhibaatooyin gudaha ah, sidaa darteed jidadkooda iyo dhismayaashoodu waxay ka tarjumayaan jiritaankaas dheer.
Caasimada Boqortooyada Midowday waxay ka mid tahay magaalooyinkan. Iyadoo la marayo qarniyadii London waxay uruurisay qaabab dhismeedyo kala duwan waana ka dhex muuqdaa dadweynaha, dhismayaasha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha kale ama naqshadaha magaalooyinka. Laakiin runtu waxay tahay in tobanaankii sano ee la soo dhaafay ay noqotay magaalo leh qaab dhismeedka casriga ah ee layaabka leh. London dib ayaa loo cusbooneysiiyey qarniga XNUMXaad.
1 Ku saabsan london
2 Qaab dhismeedka casriga ah ee London
2.4 Hoolka magaalada London
2.5 Dhismaha Lloyd
2.9 Buundada Millennium
Ku saabsan london
London waa caasimada Boqortooyada Ingiriiska waana wadnaha siyaasadeed, dhaqan iyo dhaqaale. Waxay ku dul taal daadka Webiga Thames waana laba kun oo sano. Waxaa aasaasay Romaan oo lahaa muddadaas magaca ah Londoninium dhulkuna wuxuu ahaa Roman Britain.
Markay Boqortooyadii Roomaanku halkan ku dhacday, wixii ka dhacay Yurub inteeda kale waxay dhaceen: qabiilooyinkii barbariyiinta ayaa ku soo hormaray magaalada iyo a Degitaanka Anglo-Saxon qaab yeeshay. In kasta oo dhowr jeer la soo weeraray Viking, London dib uma burburi doonto mar labaad waxayna mari doontaa waqtiyadii dhexe iyo xilliyadii is xigxigay.
Sidan ayaan maanta ku aragnaa jidadkeeda in ay jiraan tusaalooyin naqshadaha kala duwan: Qarniyadii dhexe ee Renaissance, Joorjiyaanka iyo sidii aan kor ku soo sheegnayba, laga bilaabo waqti ilaa qaybtan badan tusaalooyinka dhismaha casriga ah ee ugu wanaagsan adduunka.
Qaab dhismeedka casriga ah ee London
Qaar badan oo ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee dhismaha casriga ah waxay yihiin degmada maaliyadeed. Waxaan leenahay Dhismaha Lloyd, Millennium Dome, Taallada Heron, Buundada Millennium, Shard London Bridge, Gherkin, ka London Eye, ka Tower 42 iyo Hoolka magaalada London iyo kuwo kale. Aan si gaar ah u eegno qaar ka mid ah si gaar ah:
Magaca dhabta ah ee tan dhismihii caanka ahaa ee london waa 30 St Mary Ax. Waa daar ganacsi oo ku taal degmada maaliyadeed. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 2003 wuxuuna dhamaaday sanad kadib. Waxay leedahay 41 dabaq, dhererkiisuna waa 180 mitir. Waxay ku fadhidaa meesha dhisme loogu talagalay ganacsiga iyo maaliyadda oo ku waxyeelloobey weerarkii IRA ee 1992.
Waa dhisme tamarta ku habboon, wuxuu leeyahay hawo hawo dabiici ah iyo nidaam caawiya in la ilaaliyo kuleylka iyo qabowga, iyadoo kuxiran xilliga.
Dhismahan weyn Dhererkiisu waa 230 mitir mahada 28 mitir Waa dhismaha ugu dheer london. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 2007 wuxuuna dhamaaday 2011. Waxay leedahay irrid weyn iyo soo dhaweyn iyo waxaa jira quraaradda leh in ka badan 1200 kalluun. Waa quraaradda ugu weyn ee gaarka loo leeyahay dalka.
Waxa kale oo jira baarar - makhaayad ku taal dabaqa koowaad iyo dabaqyada 38 ilaa 40 maqaaxi iyo caadi baarka cirka - leh barxado dibedda ah kuwaas oo ay gaadhaan wiishka dabiiciga ah, taas oo ah, wax hufan.
Es mid ka mid ah daaraha dhaadheer ee ugu dheer London waxaana loo dhisay in lagu xareeyo xafiisyada Bangiga Qaranka Westminster. Waxaa la dhisay 70-meeyadii iyo si rasmi ah loo furay 1981. Boqoradda Elizabeth II waxay ku sameysay gala iyo wax walba. Hayso 183 mitir sare oo keliya sanadkii 2009-kii ayaa Tower-ka Heron ka sarraysay soddon sano oo uu xukunka hayay.
Waa dhisme xafiis ganacsi iyo xarun shirkadeed. 90-yadii waxaa soo gaadhay weerar IRA ah kaas oo sababay waxyeelo aad u daran oo ay ahayd in dib loogu soo celiyo gudaha iyo dibaddaba.
Hoolka magaalada London
Waa xarunta dawladda hoose waxayna ku taal xeebta koonfureed ee Thames. Hayso naqshad aan caadi ahayn kaas oo daba socda fikradda ah keydinta tamarta iyadoo la yareynayo dusha sare ee dhismaha laftiisa. Ma aysan shaqeyn, sida ku xusan daraasadaha dambe.
Waxaa jira kuwa barbardhiga aqalka dowladda hoose ee London ukunta ama kan maaskaro darth vader, laga bilaabo Dagaalkii Xiddigaha iyo dhadhanka yar qof ayaa sidoo kale ugu yeeray "xiniinyaha dhalada". Maxay kula tahay Xagga naqshadeynta, waxay leedahay a 500 mitir socodka lugta ah ee elliptical oo la mid ah Matxafka Guggenhaim ee ku yaal New York oo ka baxa salka illaa caaradda tan 10 sheeko dhisid.
Waxay leedahay a sagxad lagu fiirsado taasoo mararka qaar u furan dadweynaha, laakiin markaad lugeyneyso socodka waxaad arki kartaa gudaha dhismaha iyo hareerahiisa.
Dhismahan casriga ah ayaa ah degmada maaliyadeed waana xarun ka mid ah xarumaha caanka ah ee Caymiska Lloyd. Waxaa la dhisay 70-meeyadii waxaana la daahfuray bartamihii 80-meeyadii, mar labaadna waxaa gacanteeda siisay boqoradda.
Dhismahan casriga ah waxay leedahay wiishashka, jaranjarooyinka, xarunta korontada iyo tuubooyinka banaanka, qaabka Xarunta Pompidu¡ou ee Paris. Waxay ka kooban tahay saddex munaaradood oo waaweyn oo lagu daray saddex munaaradood oo adeeg ah oo ku wareegsan meel bannaan oo afar geesood ah.
Hoolka dhexe, Atrium-kaWaxay leedahay saqaf sare oo muraayad ah oo kor u kacaya meel walbana way ka bannaan yihiin. Qiyaasa wadarta Mitirka 88, waxay leedahay 14 dabaq.
Es wheel ferris ee london, aragti casri ah oo taariikhi ah Ferris giraangiraha aan ku aragno magaalooyinka kale ee adduunka. Waxay ku taal daanta koonfureed ee wabiga waxaana sidoo kale loo yaqaan 'Wheel Millennium Wheel'. Dhererkiisu waa 183 mitir dhexroorkiisuna waa 120 mitir.
Gawaarida Ferris waxaa la dhisay 1999 waxayna ahayd gawaarida ugu dheer adduunka Ferris ilaa Nanchang la dhisay, laakiin wali waa ugu sareeya Yurub. Bir badan, fiilo badan iyo gondolayaal waaweyn oo u muuqda sheekooyin saynis.
Markii loo dabaaldegayay bilawgii kunkii sadexaad ee London, dhismahan waxaa laga dhisay gacanka Greenwich, dhanka koonfur bari ee magaalada. Bandhigu wuxuu socday ilaa Diseembar 2000.
Es mid ka mid ah domesyada ugu waaweyn adduunka. Waa caddaan oo waxay leedahay 12 munaaradood oo jaalle ah, mid bil kasta oo sannadka ka mid ah ama mid saacad kasta oo saacadda ka mid ah, horay ayaannu ugu nimid Greenwich. Qubbad Dhererkiisu waa 52 mitir dhexda oo lagu sameeyo qayb ka mid ah oo leh Maro adag adkaysi u leh waqtiga.
Waa daar dhaadheer oo ka kooban 95-dabaq. Waxay leedahay wax yar ka badan 300 mitir sare waxaana la bilaabay in la dhiso 1999 si loo dhamaystiro 2012. Waxay ahayd loogu talagalay by Renzo Piano, naqshadeeye caan ah oo leh dhowr dhismeyaal casri ah oo qaab dhismeed iyo qaabab ku dheehan tahay ammaantiisa.
Waxay leedahay qaab muquun ahWaxay u muuqataa inay ka soo baxdo webiga, muraayado badan iyo sidaan u arko, muuqaal jilicsan. Waa dhisme hufan ee isticmaalka tamarta dabaqyadiisana waxay ku yaalliin xafiisyo ganacsi, makhaayado, dugsiga ganacsiga mararka qaarkood, xafiisyada Al Jazeera ee London, huteel, makhaayadaha iyo goob-faneedyada.
Waa a buundada lugta ee birta laga joojiyo ka gudba wabiga Thames. Ku xidhnow magaalada Bankside. Waxaa loo sameeyaa saddex qaybood, mid walbana mid kastaa dheereysaa, ilaa laga gaarayo buundada a wadarta dhererka 325 mitir lagu laalay fiilooyin, sideed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » England » London sidoo kale waxay leedahay qaab dhismeed casri ah
Quilotoa, oo ah luul ka mid ah Ecuadorian Andes